जब बुढी आमालाई आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् : “फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है छोरा !” – Ap Nepal
जब बुढी आमालाई आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् : “फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है छोरा !”
November 8, 2021 536
Prevआजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल कार्तिक २२ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ नोभेम्वर ०८ तारीख
Nextआज घट्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ त कारोबार ?
“नाबालिगको संरक्षण गर्नुपर्छ” भन्दा मलाई श्रद्धाञ्जली लेखियो भन्दै रेखाले स्टेजबाटै पोखिन आ’ क्रोश (भिडियो सहित)
आज तपाई सुनचाँदी किन्दै हुनु’ हुन्छ ? यस्तो छ आजको सु’ नको मूल्य